साहित्य Archives - ejhajhalko.com
काठमाडौं, असोज ७ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेको १०१ औँ जन्मदिनका अवसरमा सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको शुभकामना व्यक्त गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार ट्वीट गर्दै काव्यसाधक घिमिरेलाई जन्मदिनको बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो ट्वीटर सन्देश...
२०६ औं भानुजयन्तीको अवसरमा राष्ट्रकवि घिमिरेलाई रथारोहण
कठमाडौं, २९ असार नेपाली साहित्यका आदिकवि भानुभक्त आचार्यको २०६ औं भानुजयन्तीको अवसरमा आइतबार राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई अभिनन्दन गरिएको छ । भानु प्रतिष्ठान र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रममा राष्ट्रकवि माधवप्रसाद घिमिरेलाई उनकै कद बराबरको अभिनन्दन पत्रमार्फत् सम्मान...
भन न आमा ! तिमीले सल्काएको दियोले तिम्रा आँखाको…
आमा ! तिमीले कातेको बातीले तिम्रो पिडाको आयतन – नाप्छ कि नाप्दैन ? तिमीले दिएको अर्घले घरको निभेको चुल्हो -धुवाउ़़ंछ कि धुवाउंदैन ? तिमीले गाँसेको दुनामा तिम्रै आंसुको सागर -अटाउंछ कि अटाउंदैन ? तिमीले डढाएको धुपले तिम्रो दुखको क्यान्सर -सेकाउंछ कि सेकाउंदैन ? र तिमीले लिप्ने पोतेरीले तिम्रो सपनाको इन्द्रेण...
साहित्यकार ब्राजाकी निधन
काठमाडौँ । साहित्यकार मनु ब्राजाकी अब हामीमाझ रहनुभएन । उहाँको आज बिहान ७५ वर्षको उमेरमा निधन भएको साहित्यकार सुनिल पुरीले जानकारी दिनुभयो । मस्तिष्क शिरोघातबाट पीडित उहाँको पाटन अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो । उहाँका श्रीमती, एक छोरा र एक छोरी छन् । ब्राजाकीका ‘म र तिम्री स्वास्नी’ तथा ‘अन्नपूर्णाको भोज’ कथास...
यदि कतै म जवानीमा नै तिमि भन्दा पहिला विदा भए भने ………….
‘तिमिले मलाई तिम्रो काखमा खैलाउदै गर्दा जुन सपना देखेकी थियौ,त्यसको त्रास मलाई जति लाग्छ, त्यति डर त मलाई मेरा शत्रुहरु सँग पनि लाग्दैन ! आखिर म डराऊ किन यो स्वार्थी सँग, डराउन न त माया पनि हुनुपर्दछ ! खै कहिले पो प्रेम गरेको थियो र यो स्वार्थी दुनियाले मलाई,जति प्रेम मलाई तिम्रो काखले गर्दथ्यो, जति आनन्द ...
संगीतकार बिजय सिंह मुनालको निधन
काठमाडौं । बरिष्ठ संगीतकार बिजय सिंह मुनालको निधन भएको छ । पारिवारिक घुमघामको शिलशिलामा सहकर्मीहरुका साथ धनगडी पुगेका उनको आज निधन भएको हो । रेडियो नेपालकी बरिष्ठ रेडियो प्रसारक दिदी सुर्य कुमारी पन्तले उनको निधन भएको पुष्टी गरेकी छन् । राती खाना खाएर सुतेका उनी बिहान मृत अवस्थामा फेला परेको उनले बताएकी छन् ।हिजो...
हिरामणि दुःखी तपाइँले लगाएको टाई–सुटको मूल्य कति पर्छ कमरेड ? जान्नु थियो मलाई त्यसको मूल्य साँच्चै कति पर्दोरहेछ हँ ? ... माफ गर्नुहोला कमरेड मैले आफ्नो लागि होइन तपाइँको गाथमा ठाँटिएको टाई–सुटको मूल्य सोधेको त्यत्रो आँट मैले कसरी गर्नु कमरेड ? नत म तपाइँको सरकारी निवासमा खादा र बुकी लिएर आउन सक्छु न...
कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको स्मृतिमा कविता वाचन
काठमाडौं । कवि शिरोमणि लेखनाथ पौडेलको १३४ औं जन्मजयन्ती आज देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरि मनाइएको छ । लेखनाथको जन्मजयन्तीका अवसरमा काठमाडौं सिनामंगलस्थित त्रिमूर्ति निकेतनमा विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरियो । कार्यक्रममा श्रष्टाहरुले पौडेलको संम्झनामा कविता वाचन गरे । कार्यक्रममा सहभागीहरुले साहित्य र कला क्षेत्रमा लागे...
मण्डेलालाई पठाइएको चित्र प्रदर्शनीमा
काठमाडौँ ।‘इन्द्रजात्रा’ शीर्षकको दश फिट लम्बाइ र पाँच फिट चौडाइको बृहत् चित्रकला नेपाल कला परिषद्मा आकर्षणको केन्द्रविन्दु रहेको छ । चित्रको मूल्य रु १५ लाखले पनि यसको महत्व देखाउँछ । वरिष्ठ कलाकार शङ्करराजसिं सुवाल प्रायः ठूलै चित्रमा काम गर्नुहुन्छ । उहाँ अरुभन्दा छिटो चित्र कोर्नेमा पर्नुुहुृन्छ । तैलमाध्यममक...
डा.न्यौपानेको तीन पुस्तक एकै पटक बजारमा
काठमाडौं । डाक्टर प्रेमराज न्यौपानेद्धारा लिखित तीन कृतिहरुको आज एक कार्यक्रमका बिच लोकार्पण भएको छ । शुक्रवार काठमाडौंको प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा आयोजित कार्यक्रममा बिभिन्न साहित्यकारहरुले संयुक्त रुपमा पुस्तकको लोकार्पण गरेका हुन् । डाक्टर प्रेम न्यौपानेका अविरल प्रयास नामक लेखहरुको संगालो, गृहस्थको आदर्श जीवन नामक ...
लेखनाथ साहित्य पुरस्कार डा.जगमान गुरुङलाई
पोखरा । लेखनाथ साहित्य प्रतिष्ठानले सञ्चालन गरेको यस वर्षको लेखनाथ साहित्य पुरस्कार-२०७४ संस्कृतिकर्मी एवं साहित्यकार डा जगमान गुरुङलाई प्रदान गरिने भएको छ । कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालकी कान्छी छोरी कुन्तीदेवी भट्टराईको परिवारजनद्वारा स्थापित पुरस्कारको राशि रु ५० हजार, ताम्रपत्र र दोसल्ला रहेको छ । नेपाली संस्क...
किन देउडा गायक गुमनाम !
कुनै जमाना भोजराज भट्ट, भुवन दाहाल, नन्दराज रेग्मी, नन्दकृष्ण जोशीलगायत प्रसिद्ध देउडा गायकका गीतले गाउँ सहर गुन्जायमान थिए । उनीहरूका हरेक गीत सबैका ओठमा झुण्डिएका थिए । तर, अहिले आएर त्यस्ता चर्चित देउडा गायकका गीत ओझलमा परेका छन् । साथै देउडा गायक पनि गुमनाम छन् । देउडा गीत सुदूरपश्चिमको प्रमुख पहिचानका रूपम...
कलाकार तथा सञ्चारकर्मी पुरस्कृत
ड्रिम वल्र्ड अफ फिल्म मेकर्स प्रालिले चलचित्र क्षेत्रको विकासमा योगदान पुरयाएका वरिष्ठ चलचित्रकर्मी, निर्देशक, कलाकार तथा सञ्चारकर्मीलाई पुरस्कृत गरेको छ । यहाँ आज आयोजित कार्यक्रममा ‘श्याम–सुनिता मुखिया विशिष्ट चलचित्रकर्मी पुरस्कार’ बाट वरिष्ठ सिने निर्देशक लक्ष्मीनाथ शर्मा र गीतकार शान्ति प्रियलाई पुरस्कृत गरिए...
भन्ने गरिन्छ, पत्रकारिता हतारमा लेखिने साहित्य हो । तर, पत्रकारितासँगै आख्यान लेखनमा पनि दामोदर न्यौपानेका हात उत्तिकै चलायमान छन् । एकपछि अर्को कृति सार्वजनिक गर्न भ्याइरहेका न्यौपानले शनिबार बत्तिसपुतलीको शैली थिएटरमा ‘स्वणिर्म समय’ को घुम्टो उघारे । केही समयअघि मात्र ‘ट्यालेन्ट सो’ नामक पुस्तक बजारमा ल्याएका उ...
विमान केही घण्टाका लागि डिले भयो । प्राविधिक कारण बताएर बजेको सूचनाको सुरिलो नारी स्वर लबीमा गुञ्जियो । यात्रु चहलपहल गर्न लागे । उठेर दुवै घुँडा तन्काएपछि म फेरि त्यही बेन्चीमा बसेँ । पुस्तक हातमै थियो । त्यही बेला मैले मानबहादुर क्षत्रीलाई लबीको अघिल्लो सिटमा देखेँ । पुटुक्क खैरो झोला पिठ्युँपट्टि बोकेर ऊ पछाडि...
रातको झन्डै दश बजिसकेको थियो । छोरी ज्याकी र आमा जुलिया मलाई लाजिम्पाटस्थित होटल साँग्रिलाको बाहिरी ढोकासम्म पुर्‍याउन आए । छुटि्नुअघि मैले जुलियालाई नेपाल अनुभव लेख्नु है भनें । त्यसअघि त्यही दिन दिउँसो ३ बजेतिर बुद्धिस्ट संगीत र मन्त्रको संयुक्त ध्वनिले बौद्धस्तुपाको उत्तरपटि्टको मुख्य गुम्बाको वातावरण अनौठो थियो ...
बिहानको ९ बजे इको रिसोर्ट पुग्दा उनीहरु टेबलमा गफिदैं थिए । केटोको तुलनामा केटी निकै बढी गफी देखिएकी थिई । गफसँगै उनीहरु दूध चिया पिउँदै रहेछन् । म त्यहाँ पुगेपछि उनीहरुले छिटोछिटो चिया सकाए । अनुहारले केटो चाइनीज देखिन्थ्यो भने केटी इन्डियनजस्ती । तर, उनीहरु दुवै औपचारिक रुपले क्यानडाका नागरिक रहेछन् । रिसोर्ट छाड्...